Nguva Yekumisa Ndege kuenda kuSouth Africa? Hurukuro Itsva Pamusoro Pekushanya Ichangotanga
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » kutakura » Nguva Yekumisa Ndege kuenda kuSouth Africa? Hurukuro Itsva Pamusoro Pekushanya Ichangotanga
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Zimbabwe Breaking News • kutakura • UK Kuputsa Nhau
Mutungamiri weBritain Boris Johnson
Mutungamiri weBritain, VaBoris Johnson, vataura nemutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, nhasi masikati.
Vakakurukura nezvematambudziko akaunzwa pasi rose neiyo COVID-19 musiyano, uye nzira dzekushanda pamwe chete kubata nazvo uye kuvhurazve kufamba kwenyika.
Mutungamiriri weBritain akarumbidza kukurumidza kutevedzana kweSouth Africa genomic uye hutungamiriri mukugovana pachena data resainzi.
Vatungamiriri vakasimbisa mubatanidzwa wepedyo pakati pemarudzi edu, wakaenzanisirwa mumubatanidzwa weJust Energy Transition wakabvumiranwa kuCOP26, uye vakabvuma kuramba vari padhuze apo isu tichibata nekutyisidzira kuri kuitika kubva kudenda repasi rose.
Sekureva kweUN World Health Organisation (WHO), humbowo hwekutanga hunoratidzawo njodzi yakawedzera yekutapukirwazve neiyi mutsauko wekunetseka, zvichienzaniswa nemamwe madhiri, akadai seDelta.
Parizvino, huwandu hwenyaya hunoratidzika kunge huri kuwedzera mumatunhu ese muSouth Africa. WHO inotsanangura kuti mutsauko waonekwa nekukurumidza kupfuura mukuvhiya kwekare muhutachiona, zvichiratidza kuti "inogona kuva nemukana wekukura".
Nyanzvi dzakakumbira nyika kuti dziwedzere kuongorora uye genome sequencing kuedza kunzwisisa zviri nani musiyano.
Kune zvakare akati wandei ezvidzidzo zvirikuitika uye boka revanopa mazano reagency, rinozivikanwa nerekuti TAG-VE, richaramba richiongorora musiyano uyu. WHO ichataura zvitsva zvakawanikwa kuNhengo dzeNyika uye kune veruzhinji sezvinodiwa.
Mashoko achiri mashoma
NeChitatu, WHO's COVID-19 technical lead, Dr. Maria Van Kerkhove, vakati ruzivo nezve ikozvino 'Omicron' musiyano uchiri mashoma.
“Kune asingasviki zana akazara genome sequences aripo, isu hatisati tave kuziva zvakawanda nezve izvi. Chatinoziva ndechekuti mutsauko uyu une huwandu hukuru hwekuchinja, uye chinonetsa ndechekuti kana uine machinjiro mazhinji anogona kukanganisa maitiro ehutachiona ”, akadaro panguva yeQ&A paTwitter.
Dr. Van Kerkhove vakatsanangura kuti vatsvakurudzi vari kuedza kuona kuti kuchinja kwacho ndekupi uye kuti vangangorevei pakuongorora, kurapwa, uye zvirwere.
"Zvichatora mavhiki mashoma kuti tinzwisise kuti musiyano uyu une chekuita nei, pane basa rakawanda riri kuitika", akawedzera.
Nekutanga nhasi, bazi rezvehutano reUN rakakurudzira nyika dzese kuti dzitore nzira yakatarisana nenjodzi uye yesainzi yekurambidza kufamba kwakabatana nemusiyano mutsva wakaonekwa muSouth Africa neBotswana.
VaVan Kerkhove vakatenda vaongorori vanobva kunyika idzi nekupa pachena ruzivo kubazi rezvehutano reUN.
"Wese kunze uko: musasarura nyika dzinogovana zvadzinowana pachena", akakurudzira, sezvo nyika dzakaita seBritain, France neIsrael dzakatama kumisa ndege dzakananga kubva kuSouth Africa nenyika dzakapoteredza.
Sekureva kwevakuru vehutano muSouth Africa kusvika pari zvino, nyaya dzisingasviki zana dzemusiyano mutsva dzakasimbiswa, kunyanya pakati pevechidiki vane huwandu hwekudzivirira hwakaderera munyika.
"Nyika dzinogona kuita zvakawanda kare maererano nekutarisa uye kutevedzana uye kushanda pamwe nenyika dzakakanganisika kana pasi rose nesainzi kurwisa musiyano uyu uye kunzwisisa zvakawanda nezvazvo kuitira kuti tizive mafambiro ... saka panguva ino kuita matanho ekufambisa kuyambirwa,” mutauriri weWHO, Christian Lindmeier akaudza vatori venhau kuGeneva.
Zvidzivirire iwe nevamwe
Vakuru veWHO vakayeuchidza rairo yapfuura: vanhu vanogona kuita zvakawanda kuzvidzivirira kubva kuCOVID, kusanganisira nekuramba vakapfeka masiki uye kudzivirira mapoka.
"Munhu wese ari kunze uko anofanirwa kunzwisisa kuti kana hutachiona uhu huchitenderera zvakanyanya mikana yakawanda iyo hutachiona hunofanirwa kuchinja, tichaona shanduko dzakawanda," akadaro Dr. Van Kerkhove.
"Bayiwa kana uchinge wakwanisa, ita shuwa kuti wawana iyo yakazara madosi uye ita shuwa kuti unotora matanho ekudzikisa kuratidzwa kwako uye uzvidzivirire kubva pakupfuudza hutachiona kune mumwe munhu", akawedzera.